Akụkọ - Ihe na - egbochi mgbochi nke onye na - ebu belt
Ikpokọta ebu ebu
Groove ebu Roller
Ugboro abụọ uzo Conical ala
Galvanized metere ala
Grooved cone ala
Rubber ntekwasa cone erute ala
Igwe anaghị agba nchara cone Roller
Agbanye Conical ebu ala
Curved echebe ebu
Knife Edge echebe ebu
Ntupu echebe ebu
O Belt ebufe
Leveler N'ihi ebu
Akpata na mgbochi mgbochi nke ebu ebu ukwu
1. Ezughi oke eriri erughị ala
Ọ bụrụ na eriri adịghị enwe mgbatị zuru oke, enweghị ike ịda mba na-akwọ ụgbọ elu na-agagharị na eriri ahụ, ọ gaghị enwe ike ịdọrọ eriri ahụ na ibu ọrụ.
Obimgbalielu ngwa nke eriri ebu ebu na-agụnye ịghasa erughị ala, haịdrọlik erughị ala, arọ hama erughị ala na ụgbọala erughị ala. Ezughi oke strok ma ọ bụ na-ezighi ezi ndozi nke ịghasa ma ọ bụ haịdrọlik erughị ala ngwaọrụ, ezughi oke counterweight nke arọ hama erughị ala ngwaọrụ na ụgbọ ala ụdị erughị ala ngwaọrụ, na jam nke usoro ga-eme ezughi oke erughị ala nke belt ebu na-eme ukwu.
1) Onye na-ebugharị eriri ya na gburugburu ma ọ bụ nke ikuku hydraulic nwere ike ime ka esemokwu ahụ dịkwuo elu site na ịkpụzi ọgba aghara ahụ, mana oge ụfọdụ esemokwu ahụ ezughị ezu na eriri ahụ nwere nrụrụ na-adịgide adịgide. N'oge a, enwere ike bepụ ngalaba nke eriri ahụ maka nrụrụ aka ọzọ.
2) A na-ebufe belt na-ebugharị eriri ala na esemokwu ụgbọ ala site na ịbawanye ụba nke counterweight ma ọ bụ iwepu jam nke usoro. Ekwesiri ighota na mgbe ị na-abawanye nhazi nke ihe ngbaghara ahu, enwere ike itinye ya na eriri ahu n'eweghi iwe, ma odighi nma itinye otutu ihe, ka oghara ime ka eriri ahu buru oke erughị ala na-enweghị isi ma belata ndụ ọrụ ya. .
2. Thegba draịva n’adị akwa
A na-ejikarị mkpuchi roba ma ọ bụ nkedo na-akwọ ụgbọala na-akwọ ụgbọala na-ebugharị ya na mkpuchi ma ọ bụ nkedo, na herringbone ma ọ bụ diamond na-atụkwasị n'elu roba iji melite esemokwu ọnụọgụ ma mee ka esemokwu dịkwuo elu. Mgbe ọ gbasịrị ọsọ ogologo oge, a ga-eyi akwa roba na uzo nke ịkwọ ụgbọ ala nke ọma, nke ga-ebelata esemokwu nke esemokwu na esemokwu nke ikuku ịkwọ ụgbọ ala ma mee ka eriri ahụ na-amị amị.
Ngwọta: bụrụ na nke a ọnọdụ, usoro nke re wrapping ma ọ bụ dochie ndị drum kwesịrị nakweere. Na nyocha nke ụbọchị ọ bụla, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya na nyocha nke ihe nkedo nke draịvụ draịva, iji zere na enweghi ike ịchọta uwe dị oke na oge, na-eme ka eriri na-amị amị ma na-emetụta ọrụ nkịtị.
Post oge: Mar-03-2021
The mmepe direction nke ebu na ...
Akpata na mgbochi jikoro nke eriri co ...
Arụ ọrụ ụkpụrụ nke belt ebu
22lọ 227, ụlọ 1, 656 Qixing Road, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province, China
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086-13325920830